Famerenana ny hasin’ny fitsarana :: Manamafy ny ady atrehina ny minisitra Randrianasolo Jacques • AoRaha
Famerenana ny hasin’ny fitsarana Manamafy ny ady atrehina ny minisitra Randrianasolo Jacques
Hentitra ny tenin’ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques, nandritra ny fitokanana ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany, tany Morombe, omaly. Nampahafantariny tao anatin’ny fandraisam-pitenenany fa mila manova fomba fiasa ny mpitsara rehetra mba hahafahana miala amin’ireo fomba ratsy izay maha voasokajy ny Fitsarana ho isan’ny lohalaharana amin’ny fanaovana kolikoly.
Manamafy ny toromariky ny Filohan’ny Repoblika momba ny famerenana ny hasin’ny Fitsarana izany hafatry ny minisitra Randrianasolo Jacques izany. Tohin’ny fifanatrehan’ny Filoha tamin’ireo mpikamban’ny Filankevitra Ambonin’ny mpitsara (CSM), sy ny fivoriana niarahan’ny minisitra tamin’iretsy farany, tamin’ny herinandro lasa iny.
Nolazain’ny minisitry ny Fitsarana tamin’ny antso an-tariby nifanaovana taminy, omaly, fa: “tsy maintsy hanao ny ezaka rehetra ireo mpisehatra ao amin’ny minisiteran’ny Fitsarana mba hahatonga an’ireo raharaham-pitsarana ho mailaka sy madio”. “Mampitandrina an’ireo olona mihevitra ny tenany ho tsimatimanota sy tsy azo kitihina koa izahay fa tsy hanananay hantra izy ireo ary tsy maintsy hofongorina izany satria fanetriben’ny firenena”, hoy izy.
Ady amin’ny fahalovana :: “Hanabe ny olona handà kolikoly isika”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco